IPadOS 15 talooyin iyo tabaha si aad uga faa'ideysato | Wararka IPhone
IPadOS 15 Talooyin iyo tabaha si aad uga faa’idaysato
Miguel Hernández | 03/08/2021 22:00 | macruufka, macruufka 14, iPad, dhowr
Imaanshada macruufka 15 wuu soo dhowaanayaa oo wuu soo dhowaanayaa, taasi waa sababta aan u haysanno dookh kale oo aan ahayn inaan falanqeyno nidaamka hawlgalka mustaqbalka ee shirkadda Cupertino si aan si fiican kuugu wargalinno xilligan wararka oo dhan, markaas oo keliya ayaad awoodi doontaa inaad sida ugu fiican uga faa'iidaysato qalab iyo taas waxaan hadda nahay iPhone.
Nala soo hel khiyaamadan yar iyo wararka iPadOS 15 ee aan kuu keenno oo aan u qabanno iPadkaaga sida khabiir. Ha seegin, hubaal qaar badan oo kuwan ka mid ah weli ma garanaysid oo way kaa yaabinayaan, ma waxaad seegaysaa fursadan?
Sida munaasabadaha kale, waxaan go'aansannay inaan ku raacno qoraalkan fiidiyow cajiib ah kanaalkayaga YouTube, sidaa darteed haddii aadan ogeyn, waa waqti ku habboon inaad is -qorto oo aad naga caawiso inaan sii wadno kobcinta, waxaan hore u harsannay dhowr ka mid ah macaamiisha 100.00 oo dhammaantoodna waa tirinayaan.
Waxaan fursaddan uga faa'iideysanaynaa inaan ku xasuusinno hadda iPadOS 15 Waxay ku jirtaa wejiga beta, sidaa darteed warkan ayaa laga yaabaa inay ku dhacaan isbeddello yar oo u dhexeeya hadda iyo Sebtembar ama Oktoobar, kaas oo lagu dhawaaqi doono inuu si rasmi ah u bilaabmayo nidaamka qalliinka.
1 Turjumaanka ayaa si buuxda isku dhafan
2 Muraayadda weyneyntu way soo noqotay waxaanan haysannaa khaanad codsi
3 Isbedelada Safari iyo hawlo badan oo cusub
4 Asturnaanta marka la wadaagayo shaashadda iyo is -dhexgalka macOS
5 Sawirrada TV -ga Apple -ka iyo hagaajinta fog
Turjumaanka ayaa si buuxda isku dhafan
Hadda tarjumaanka macruufka 15 ayaa si buuxda loogu dhex daray iPadOS 15 imaatinka nidaamka hawlgalka cusub, markaa waa inaadan seegin fursadda Apple ku siineyso. Marka hore, turjumaanka waxaa si buuxda loogu ballaariyay Safari, sidaa darteed, Markaan galno degel ku qoran luqad kale, astaanta «turjumaan» ayaa ka soo muuqan doonta baarinta Safari. Si fudud u riixitaanku wuxuu sameyn doonaa sixirka boggana waa la turjumi doonaa. Imtixaannadeenii waxay keeneen natiijooyin wanaagsan tarjumaadduna aad bay ugu wanaagsan yihiin waxaad filan lahayd.
Sidoo kale waxay ku dhacdaa codsiga turjumidda oo ugu dambayntii gaadha iPadOS 15 si dhammaystiran. Sidan ayaan u yeelan doonnaa dhowr hab oo turjumaad, kan koowaad waa kan kuu oggolaanaya inaad turjunto qoraalka aad gasho mid kasta oo ka mid ah afafka la helo gudaha kabka. Isla sidaas ayaa ku dhici doonta qaabka “wada sheekaysiga”, waxaad si fudud u dhageysan doontaa makarafoonka oo aad na siin doontaa natiijada. Dhab ahaantii, arjiga waxaa loo diyaarin doonaa si qumman iyo shaashad kala go'an si is -dhex -galayaasha ay si fudud ula falgalaan is -dhexgalka adeegsadaha. Sida iska cad waxaan sidoo kale si toos ah ugu turjumi karnaa makarafoonka, iyo xitaa astaamaha cusub ee is -dhexgalka iyo aqoonsiga qoraalka kaamerada.
Muraayadda weyneyntu way soo noqotay waxaanan haysannaa khaanad codsi
Sidaad ku xasuusan doonto adeegsadayaasha “ruug -caddaaga” ugu badan ee macruufkaan, Waagii hore, kahor imaanshaha duubista xulashada (marka aad hoos u qabato batoonka meesha furaha), xulashada qoraalka ayaa furi doonta "muraayadda weyneynta" si aan si sax ah ugu beddelno xarfaha. Waa hagaag, muraayaddaas weyneynta cajiibka ah ayaa si sixir ah ugu soo noqotay IOS 15 si loo fududeeyo dhammaan habraacyada.
Khaanadda app -ka ee iOS 15, nidaamkaas kala -soocidda app -ka cusub ee aad jeceshahay ama necbayd Shakhsi ahaan, waxay umuuqataa guul waxaanan caadeystay isticmaalkiisa, aan runta sheegno, maalin walba ma isticmaalno codsiyo ka badan kuwa ka muuqda shaashadda guriga. Si kastaba ha noqotee, daabacaadda shaashadaha guriga, Widgets iyo dalbashada Spotlight -ka ayaa sidoo kale yimaada iPadOS 15 maadaama aysan si kale noqon karin.
Isbedelada Safari iyo hawlo badan oo cusub
Safari wuxuu ahaa mid ka mid ah "kuwa lumiyey" ee macruufkaan cusub ee 15, hadda nidaamka maaraynta tabku wuxuu u eg yahay macOS sidii hore, taas oo naga dhigaysa mid la yaab leh oo aan aad u dareensanayn marka hore. Sidan oo kale, fidinta iyo codsiyada gudaha ayaa waliba gaara qoto dheer.
Waxaad si fudud u dhaqaajin kartaa tabsiyada
Habee tabyada ku yaal dhinaca bidixda
Ku dar oo habee shaashadda guriga
La mid ah hawlo badan, Hadda waxay ka muuqan doontaa dhibic saddex -laab ah qaybta sare, hoos -u -dhaca waxaan awood u yeelan doonnaa inaan is -dhexgalno oo bar -weynaha ayaa soo bixi doona oo noo oggolaanaysa inaan cabbirka ku hagaajino sida aan jeclahay oo aan ku guuleysanno.
Waxaad ku maareyn kartaa hawlo badan adigoo ku dhaadhicinaya barta saddexda sare kor> hoos
Markay hawlo badan qabanayaan codsiyada ku jira SplitView way wada muuqdaan waanan xiri karnaa
Inta kale ee tilmaamaha caadiga ah ee hawlo badan leh ayaa hadhay
Asturnaanta marka la wadaagayo shaashadda iyo is -dhexgalka macOS
Waxaan ku bilownaa waddo aad u xiiso badan, haddii aad tagto Dejinta> Ogeysiisyada> Shaashadda wadaag waxaad awoodi doontaa inaad damiso ama dhaqaajiso haddii aad jeceshahay suurtogalnimada inaad tusto iyo haddii kaleba ogeysiisyada aan helno inta aan shaashadda wadaagno. Sidaad ogtahay, FaceTime hadda waxay noo oggolaanaysaa inaan ku wadaagno waxa aan ku sameyneyno iPadkayga inta aan waceyno, sidaa darteed naafaynta ogeysiisyada waa ficil ahaan lama huraan.
Haddaad si fiican u xasuusato, is -dhexgalka macOS wuxuu noo oggolaanayaa inaan u isticmaalno iPad -ka sida desktop -ka la dheereeyey, Hagaag, kaliya maahan in la muujiyo waxa ku jira laakiin keyboard -ka cusub ee iPadOS iyo cursor -ka ayaa la isku dari doonaa marka aan jiirka ka soo qaadno shaashadda aan ka wadno macOS si aan toos ugu siino iPadOS waayo -aragnimo fiican, isku day.
Sawirrada TV -ga Apple -ka iyo hagaajinta fog
Codsiga Sawirradu wuxuu ka mid ahaa ka -faa'iideystayaasha weyn ee imaatinka iPadOS 15, gaar ahaan xagga awoodda. Hadda markaan dooranno sawir, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan riixno badhanka «i» oo ay macluumaad badani ka soo bixi doonaan:
Waxaan ku dari karnaa qoraalka si aan u caawino Sirdoonka Artificial iyo Spotlight
Waxaan heli karnaa magaca gaarka ah iyo taariikhda sawirka
Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan helno macluumaadka EXIF ​​oo na tusi doona aaladda sawirka, astaamaha kamaradda iyo dejinta tallaalka gaarka ah
Waxay tusi doonaan khariidad yar oo leh meelaynta sawirka haddii aan rabno.
Ugu dambayntiina telefishinka cusub ee Apple TV, Haddii aad hoos u dhaadhacdo> hoos u dhig si aad hoos ugu dhigto Xarunta Xakamaynta, waxaad ku arki doontaa dhinaca midig (haddii aad guriga ku haysato Apple TV) fog fog ee Apple TV. In kasta oo ay ka yaryihiin oo muujinayaan trackpad -ka yar ee noo fududeyn doona adeegsiga, waxay lumisaa nus shaashad mana awoodi doonno inaan ku isticmaalno SplitView, wax aan u malaynayno inay sixi doonaan mustaqbalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » IPadOS 15 Talooyin iyo tabaha si aad uga faa’idaysato